अरुबेला हिन्दी फिल्मको बिरोध गर्ने निर्माता अहिले हिन्दी फिल्मकै भरमा अरुबेला हिन्दी फिल्मको बिरोध गर्ने निर्माता अहिले हिन्दी फिल्मकै भरमा
कार्तिक २८, २०७८ ध्रुव राज न्यौपाने (डि.आर.एन)
मनोरञ्जनको ग्यारेन्टीभए फिल्म चल्ने ‘सूर्यवंशी’ को सन्देश
लामो समय देखी ठप्प भएको फिल्म क्षेत्र केही समय देखी चलायमान नै देखिएको छ । फिल्म हल चलायमान भएपनि दर्शकको आगमन हेर्दा चाँहि निराशजनक नै बन्यो । दर्शकले हेर्न चाहेको फिल्म रिलिज गर्न निर्माता डराए । फिल्म रिलिज डेट लिन निर्माता निर्देशकले राम्रै पापड पेल्नु पथ्र्यो । यो वर्ष भने कुनै पनि निर्माता निर्देशकले दसैँमा फिल्म हलमा लगाउने आँट गर्न सकेनन् । उनीहरूले भने, ‘दर्शक हलसम्म आउँने वातावरण बनिसकेको छैन ।’
उनीहरुको यो तर्कलाई बलिउड फिल्म ‘सूर्यवंशी’ले हावा खुवाएको छ । तिहारको अवसर पारेर प्रदर्शन भएको फिल्म हेर्न हलमा दर्शकको निक्कै बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । कयौं ‘सो’ मा दर्शक टिकट नपाएर फर्किएका छन् । लामो समयदेखि सुनसान नेपाली सिनेमा घरको रौनक ‘सूर्यवंशी’ ले फर्काइदिएको छ । चलचित्र पारखीहरू भन्न थालेका छन्, ‘फिल्म राम्रो हुनुपर्छ, दर्शक आउँछन् ।’चलचित्र संघ र चलचित्र विकास बोर्डले दिएको विभिन्न सुविधालाई समेत वास्ता नगरी उनीहरु करोडौंको लगानी जोखिममा नपार्ने अडानमा बसे । अर्थात् कोरोनापछि दर्शक ओटीटी प्लेटफर्ममा आकर्षित भएको, हल जान डराएको लगायतका तर्क पेश गर्दै निर्माताहरु खुम्चिएरै बसे । निर्देशक शोभित बस्नेतले ‘डाँडाको वरपीपल’ रिलिज गरेपनि त्यो बक्स अफिसमा लागि पर्याप्त बनेन ।
कोरोना माहामारीको कारण सबै क्षेत्र अस्वयस्त नै बन्यो फिल्म क्षेत्र पनि अछुतो भने रहेन । लगभग डेड÷दुई वर्ष ओझेल परेको फिल्म क्षेत्र दशैंबाट भने चहलपहल हुन थालेको छ । फिल्म डाडाँको बरपिपल हल भरी प्रर्दशनमा आयो तर दर्शक भने आएनन् । फिल्म हललमा दर्शकको उपस्थिति देखेर निर्माता र वितरक दुबै अक्मकाए । हल खुलेदेखि नै दर्शकको खडेरी खेप्दै आएका फिल्म हलले थोरै मात्रामा आशा जगाएका छन् । अपेक्षाअनुरुपमा नै बलिउड फिल्म ‘सूर्यवंशी’ले दर्शक हलसम्म बोलाउन सफल भएपछि सिनेमाघर सञ्चालकले राहत महसुस गरेका हुन् ।
अरु बेलामा हिन्दी चलचित्रले नेपाली चलचित्रमाथि थिचोमिचो गर्यो भनेर चर्को बोली बोलेपनि यसपटक सबैजसो निर्माता हिन्दी चलचित्रकै आशमा बसे । अघिपछि सधै जसो हिन्दी चलचित्रकै डरमा बस्ने निर्माता निर्देशकहरु यसपालि भने त्यहि हिन्दी फिल्मकै भरमा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो । अनुकुल समयमा हिन्दि फिल्मको डर, प्रतिकुल समयमा भने हिन्दी फिल्मकै भर हाम्रा निर्माताहरुको नियती जस्तै भयो । तिहारमा रोहित सेट्ठीको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘सूर्यवंशी’ले हलमा दर्शक तानिदियो भने बल्ल हामी पनि रिलिज गर्छौं भन्ने सोचमा देखिएका थिए निर्माताहरु । तर अहिले भने बलिउड फिल्म ‘सूर्यवंशी’को व्यापारले नेपाली निर्मातालाई हौसला बढेको छ । डेढ वर्षदेखि तयार रहेर पनि फिल्म रिलिज गर्ने हिम्मत जुटाउन नसकेका निर्माताले फिल्म रिलिजको मिति तोक्न थालेका छन् । अहिले ‘सूर्यवंशी’ले भरमार व्यापार गरेपछि धेरै निर्माताहरु आफ्नो फिल्मको रिलिज मिति तोक्न थालेका छन् ।
कोरोनापछि सय करोड क्लबमा प्रवेश गर्ने यो पहिलो चलचित्र बनेको छ ।
चलचित्रले एक सातामा १२० करोडको कमाइ गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । रोहित सेठ्ठीको निर्देशनमा तयारमा भएको फिल्ममा अक्षय कुमार रर कट्रिना कैफ मुख्य भूमिकामा रहेका छन् । फिल्ममा अजय देवगन र रनवीर सिंहको अतिथि भूमिका रहेको छ । फिल्मले मास इन्टरटेनरको रुपमा समीक्षकबाट तारिफ पाएको थियो । त्योभन्दा बढी फिल्मले दर्शक हलमा बोलाएको भन्दै फिल्मकर्मी र फिल्म पत्रकारले यसको तारिफ गरेका छन् । गोलमाल शृंखलादेखि सिंघमसम्मका सबै फिल्मले सय करोड माथिको व्यापार गर्दै आएका छन् । मनोरञ्जनको ग्यारेन्टि भए फिल्म अझै चल्छ, दर्शकहरु हल सम्म फिल्म हेर्न अझै जान्छन भन्ने गतिलो सन्देश चललित्र ‘सूर्यवंशी’ ले दिएको छ । नेपाली सिनेमा मेकरहरुले राम्रा फिल्म बनाउने र चलाउने हो भने हलको क्रेज अझै उस्तै छ भन्ने झलक ‘सूर्यवंशीले देखाएको छ । ‘सूर्यवंशी’ फिल्म चलेपनि अव नेपाली चलचित्र पनि मज्जाले चल्छ भन्ने अवस्था चाहि अझै आएको छ भनेर भन्न सकिदैन । किनकि फिल्म चल्नका लागि फिल्म राम्रो हुनुपर्ने पहिलो शर्त हो । यदि नेपाली फिल्म रिलिज हुने र फिल्म राम्रो नभए फेरी पनि डाँडाको वर पिपल जस्तै नहोला भनेर भन्न सकिन्न । तसर्थ राम्रो फिल्म भए चल्छ हैन भने फिल्म चलन गाह«ो भन्ने कुरा ‘सूर्यवंशी’ ले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
धमाधम प्रदर्शन मिति तोकिँदै
लगभग दुई वर्ष नेपालका चानचुन दुई सय सिनेमा घरमा सन्नाटा छायो । अब सिनेमा हल खुल्छ ? फिल्म प्रदर्शन हुन्छन् ? दर्शकहरु हलसम्म आउँछन् ? यावत् प्रश्नको कुनै ठोस जवाफ थिएन ।
यसबीचमा केही सिनेमा हल त बन्द नै भए । तर, समय सधैं एकनास रहँदैन । कोरोनाको भय घट्दै गयो । जनजीवन सामान्य बन्दै गयो । सिनेमा हलहरु खुल्न थाले । एकाध नेपाली सिनेमा प्रदर्शनमा आए । तर, ती सिनेमाहरुले दर्शकलाई टिकट काउण्टरको लाममा उभ्याउन सकेनन् । यसरी बल्लतल्ल प्रदर्शनमा आएका सिनेमा पनि रित्तै भएपछि फिल्मकर्मीको मुटुमा अझै ढ्याङ्ग्रो बज्न थाल्यो । उनीहरु नराम्ररी हच्किए । र, प्रदर्शनको मुखैमा अड्किएका सिनेमा पनि थन्को लगाइयो ।
यही धर्मर अवस्थामा दक्षिण भारतीय सिनेमामा हिरोको ‘इन्ट्री’ भए जसरी धमाकेदार रुपमा बलिउड फिल्म ‘सूर्यवंशी’ प्रदर्शनमा आयो । अक्षयकुमार स्टारर यस चलचित्रले सिनेमा हलमा दर्शक फर्काइदियो । हल खचाखच हुन थाले ।
अन्ततः नेपाली सिनेकर्मीमा समेत एउटा बेग्लै आशा तरंगित भयो । उनीहरुले सोचे, ‘सिनेमा घरको तलतल मेट्न दर्शक ओइरो लाग्ने रहेछन् ।’ यही सोचेर उनीहरुले आफ्ना फिल्मको प्रदर्शन मिति तोक्न थालेका छन् । कतिले उपयुक्त साइत जुराएर आफ्ना चलचित्रको प्रदर्शन मिति घोषणा गरिसकेका छन् भने कति पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
अर्जुन कुमारको निर्माण एवं निकेश खड्काको निर्देशन रहेको चलचित्र ‘चपली हाइट–३’ले गत सोमबार पुस २ का लागि आफ्नो प्रदर्शन मिति तोकेको छ । ‘सूर्यवंशी’ले हलमा माहोल ल्याएसँगै आफूहरुले चलचित्र प्रदर्शन मिति तय गरेको निर्देशक निकेश खड्काले बताएका छन् ।
‘चपली हाइट ३’ले २०७६ को चैत २८ गतेका लागि प्रदर्शन मिति तोकेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण यो चलचित्र सो मितिमा प्रदर्शन हुन सकेको थिएन । ‘चपली हाइट ३’ क्राइम थ्रिलर जनरामा बनेको चलचित्र हो । चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, आमिर गौतम, सुपुष्पा भट्ट, अर्पण थापा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । ‘चपली हाइट’का यसअगाडिका सिरिज सफल मानिन्छन्।‘सूर्यवंशी प्रदर्शनमा आएपछि हलमा माहोल राम्रो देखियो । त्यसले हामीलाई आँट आयो,’ उनले भने, ‘अब एक खालको माहोल बन्छ भन्ने अपेक्षा हो ।’
चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ले माघ १९ गतेका लागि प्रदर्शन मिति तोकेको छ । निर्देशक सुदर्शन थापाले बिहीबार मात्रै चलचित्रको नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा गरेका हुन् । ‘कुनै एक चलचित्र मात्र नभई पूरै नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै चलायमान हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । सोही उद्देश्यका साथ नेपाली चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउछु २’ यही वर्षको माघ १९ मा प्रदर्शन गरिने निर्णय गरेका छौं,’ निर्माता समेत रहेका थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ कोरोना महामारी अगाडि नै प्रदर्शनका लागि तयार भएको चलचित्र हो । निर्माण टिमले २०७६ फागुन ३० गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकेर प्रचारप्रसारमा लाखौं खर्च गरिसकेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण चलचित्र प्रदर्शन हुन सकेन ।
सुदर्शन र नायिका पूजा शर्माको निर्माणमा बनेको चलचित्रमा पूजा र पल शाह मुख्य भूमिकामा छन् । यो प्रेमकथामा निर्माण भएको चलचित्र हो । यसको पहिलो सिरिज सफल मानिएको थियो ।
यसअघि नै केही चलचित्रले प्रदर्शन मिति तोकिसकेका छन् । सुमन पौडेलको लेखन तथा निर्देशनमा तयार चलचित्र ‘ओभरडोज’ले मंसिर १७ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकेको छ ।
चलचित्रमा लागूऔषध र अपराधको कथा देखाउन खोजिएको निर्माणपक्षले जनाएको छ । चलचित्रमा प्रनिशराज पन्त, सविनजंग थापा र वीना श्रेष्ठ लगायतको अभिनय छ ।
यस्तै ऋषिराज आचार्यद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘चुरीफुरी’ले दाङमा भएको चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल को कार्यक्रममा पुस ९ गतेका लागि प्रदर्शन मिति तोकेको थियो । सिनेमा हल खुलेसँगै यस चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गरिएको थियो । कमेडी विधाको यो चलचित्रमा आचार्यकै लेखन र निर्माण छ ।
चलचित्रमा अभिषेकश्रेष्ठ, पूजा पन्त, राजीवजंग बस्नेत, रवीन्द्र झा, शिशिर भण्डारी लगायतका थुप्रै कलाकारहरुको अभिनय छ । दुई साताअगाडि चलचित्रको शीर्षगीत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
चलचित्र ‘लप्पन छप्पन २’ ले दुई महिना अगाडि नै फागुन १३ गतेका लागि प्रदर्शन मिति तय गरेको छ । मुकुन्द भट्टले निदेशन गरेको यो चलचित्र शिवरात्रीको अवसर पारेर रिलिज हुनेछ ।
एक्सन जनरामा निर्माण भएको यो चलचित्र गत वर्षको शिवरात्रीमा प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण प्रदर्शनमा आउन नसकेको यो चलचित्रले यस वर्षको शिवरात्रीका लागि प्रदर्शन मिति तोकेको हो । चलचित्रमा अर्पण थापा, सौगात मल्ल, अनुपविक्रम शाही, शक्ति श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
सुनिलकुमार थापाको निर्माण तथा झरना थापाको निर्देशन रहेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’ले चैत २५ मा रिलिज हुने भएको छ । यसअघि यो चलचित्रले भदौ १८ गतेका लागि प्रदर्शन मिति तय गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण निर्धारित मितिमा प्रदर्शन नगरी चलचित्र चैतमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय निर्माण टिमले लिएको हो । अनमोल केसी, सुहाना थापा र सलोन बस्नेतको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र प्रेमकथामा आधारित छ ।
यसैगरी दीपेन्द्र के. खनालको लेखन तथा निर्देशन रहेको चलचित्र ‘चिसो मान्छे’ आगामी वर्षको वैशाख ३० गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ । छायांकन प्रारम्भ नहुँदै २०७८ को भदौलाई प्रदर्शन मिति तोेकेको चलचित्र निर्धारित मितिमा प्रदर्शनमा आउन सकेन । निर्माण टिमले गत महिना आगामी वैशाखका लागि प्रदर्शन मिति तय गरेको हो । यस चलचित्रलाई शर्मिला पाण्डेले निर्माण गरेकी हुन् । सामाजिक कथामा निर्माण भएको चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, अर्पण थापा, देशभक्त खनाल लगायतको शीर्ष भूमिका छ । ्
अभिनेता प्रदीप खड्काको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘प्रकाश’ अर्को वर्ष रिलिज हुने भएको छ । निर्देशक दिनेश राउतले फिल्मको रिलिज अर्को वर्षमात्र गर्ने बताए । ‘‘प्रकाश’ यो बर्ष रिलिज गर्दैनौ । अर्को वर्षमात्र रिलिज हुन्छ’ निर्देशक राउतले अर्को बर्षको बैशाखमा फिल्म रिलिज हुने बताएका छन् ।
हलमा चहलपहल देखिएन,प्रदर्शनीको तयारीमा रहेको फिल्म पनि थन्किए
हल खुल्ने बित्तिकै रिलिज हुने फिल्मलाई चलचित्र विकास बोर्डले सहयोग गर्ने ?
पौष महिनामा महोत्सव सान्दर्भिक छैन : ब्यबसायी
एमाले महाधिवेशन : निर्विरोध निर्वाचित हुने ५ पदाधिकारी
बक्स अफिसलाई चलायमान बनाउन सक्ने ५ फिल्म ?
रेखाले राप्रपाको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने
फागनु १३ मा ‘प्रेमगीत ३’ रिलिज हुने भएपछि ‘लप्पनछप्पन २’ अन्योलमा